သန့် ရှင်း သပ်ရပ် လှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်သော အ်ိပ်ယာ နှင့် အိပ်ခန်း ပုံစံများ ( Bed Room )
Mya Nan Dar ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အဆောက်အဦး၊ ဟိုတယ် များတွင် ရှိ သောလူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ယာ အိပ်ခန်းများကို လှပပီးခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းဆန်သော အိပ်ယာ အိပ်ခန်းများ အဖြစ်သို့ ပြောင်း လဲ လာစေရန် အိမ်အတွင်းပိုင်ရှိ အိပ်ခန်းများကို အလှဆင်ပေးေ နသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိပ်ယာ နှင့်အိပ်ခန်းများကို လှပသေသပ်သော ဒီဇိုင်းပုံစံများဖြင့် အလှဆင်နိုင်ရန်အတွက် Mya Nan Dar ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အတွင်းပိုင်း အလှဆင်ပေးရာတွင်လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိမ်တွင်ရှိသော အိပ်ယာနှင့် အိပ်ခန်းများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် နောက်ဆုံးပေါ် ပုံစံဒီဇိုင်းများဖြင့် အလှဆင်ပီး သန့် ရှင်းသပ်ရပ်လှပသော အိပ်ယာနှင့်အိပ်ခန်းများအဖြစ် အလှ ဆင်လိုပါက Myan Nan Dar ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
ပေါ်လီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ဆေး၏ သိသာထင်ရှားစွာ ရရှိစေနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများကြောင့် လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဆောက်အဦးများ အသစ်တည်ဆောင်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဖော့ဆေးကိုရွေးချယ်မှုသည် သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသော ရွေးချယ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အမိုးများအားဖော့ဆေးဖြန်းခြင်းသည် အဆောက်အဦးပိုင်ရှင်များကို စွမ်းအင်သက်သာစေခြင်း၊ ငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေခြင်း၊ မီး၊ ရေ လေ စသော သဘောဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် နွေမိုးဆောင်းစသော ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်စေခြင်း၊ အသံလုံစေခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို သိသာထင်ရှားစွာရရှိစေပါသည်။ ၄င်းဖော့ဆေးသည် အထူးကျစ်လစ်သိပ်သည်းပြီး အဆောက်အဦးရှိသရွေ့ တာရှည်ခံနိုင်စွမ်းရှိသော ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ဖော့ဆေးသည် စတင်အသုံးပြုသောအခါ အရည်အနေဖြင့် အပေါက်ငယ်များ၊ ချိုင့်ခွက်များ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ကျည်းမြောင်းသော ကြားနေရာများ၊ ကွက်လပ်အတွင်းသို့ လေဟာနယ်မရှိအောင် အလွယ်တကူဝင်ရောက်ဖြည့်ပေးပြီး ခဏအတွင်းဖော့အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေသောကြောင့် သင့်အဆောက်အဦးကို လုံခြုံစေသည့်အပြင် များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ကိုအသုံးပြုနိုင်သော နေရာများ အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံများ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာစက်ရုံများမှ အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်ရုံခန်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အီလက်ထရောနစ် စက်ရုံများ၊ LPG-LNG သိုလှောင်ကန်များ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ ကွန်ဒိုအဆင့်မြင့်တိုက်ကြီးများ၊ တိုက်ခန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ အဏ္ဏဝါရေကြောင်းဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဘော်ယာများ လူနေအိမ်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ စသည့်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ စွမ်းအင်သက်သာခြင်း အပူဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း ဖော့ဆေးသည် အပူကိုသိသာထင်ရှားစွာခုခံကာကွယ်နိုင်ခြင်းနှင့် အခန်းအတွင်းအအေးဓာတ်ကို တာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း (ဥပမာ။ ။ အဲယားကွန်းအခန်းများတွင် အသုံးပြုပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအပြားသုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အား သက်သာစေပါသည်။) အတွင်းမှလေများကို အပြင်သို့ မထွက်စေခြင်းနှင့် အပြင်မှလာသောလေများကို အတွင်းသို့ မဝင်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လေမလုံ၍ လေစိမ့်ဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပွားတက်သော အစိုပြန်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ အဖက်ဖက်မှလာသောအပူဒဏ်ကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်းစသော အထူးဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသောကြောင့် ဖော့ဆေးသည် နွေရာသီအတွက် အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အလွယ်တကူမီးမလောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်း ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့သည် အလွယ်တကူမီးမလောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အလွယ်တကူမီးလောင်မှုကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ရေလုံခြင်းနှင့် ရေစုပ်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း ဖော့ဆေးကို စတင်အသုံးပြုသောအခါ အရည်အနေဖြင့် အပေါက်ငယ်များ၊ ချိုင့်ခွက်များ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ ကွက်လပ်များကို ဖြည့်ပေးပြီး ခဏအတွင်းဖော့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ရေလုံခြင်းနှင့် ရေဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း စသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ရရှိစေပါသည်။ ထို့ အပြင် ရေစုပ်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ထပ်မံရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အသံလုံခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်အသံပျံနှံ့မှု ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှလာသောအသံများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း (သို့) အသံလုံခြင်း စသော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်များစွာ အကျိုးကျေးဇူးရှိသော ဖော့ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ဆေးကို အသုံးပြုသောအခါ ဖော့ဆေးသည် အနံ့မရှိသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အနံ့ဆိုးများ ပျံ့နှံ့ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း၊ ဖော့ဆေးသည် ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့် အမှုန့် ထွက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှကြည့်မည်ဆိုပါက သင့်တော်သော ဖော့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ISO-14000) ရရှိထားသောကြောင့် ဖော့ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူမူပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည့်သည်ဆိုးကျိုးမှ သက်ရောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲသင့်သော ဖော့ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အခန်းအတွင်းလေထုမျှတခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအေးဂျင်စီ (EPA) အရ အခန်းအတွင်း လေအရည်အသွေးနေထိုင်မှု၏ အဓိကကျသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဖော့ဆေးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သော စိုစွတ်မှုများဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မှိုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ အနံ့မရှိသောကြောင့် အသုံးပြုသူများအား အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေဒနာများ မဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ဖော့ဆေးတွင် အသုံးပြုထားသော ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် အသုံးပြုသူများအပေါ်တွင် ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် Allergies ဖြစ်ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။
Success Property Consultant Company ဟာဆိုရင်ပြည်တွင်းပြည်ပကကွန်ဒိုprojectများအားတာဝန်ယူရောင်းချပေးတဲ့ Company တခုဖြစ်ပါတယ်။ယခုပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာဆိုရင်မြန်မာနိင်ငံရဲအကောင်းဆုံးကွန်ဒို6ခုကိုအထူးPROMOTION အစီစဉ်များနဲ့ရောင်းချပေးနေပါသည်
ဒီဇိုင်းဆန်းပီး လှပ သေသပ်သော အိမ် ဧည့်ခန်းများ ( Living Room )
Mya Nan Dar ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အဆောက်အဦး၊ ဟိုတယ် များတွင် ရှိ သောလူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ဧည့်ခန်းနှင့် အခြား အလှဆင် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများကို လှပပီး ခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းဆန်သော အိမ် ဧည့်ခန်းများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ လာစေရန် Mya Nan Dar ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် အလှဆင်ပေး နေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိမ် ဧည့်ခန်းများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ လှပသေသပ်သော ဒီဇိုင်း ပုံစံများဖြင့် အလှဆင်နိုင်ရန်အတွက် Mya Nan Dar ကုမ္ပဏီမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အတွင်းပိုင်းဖြစ်သည့် အိမ် ဧည့်ခန်းများကို အလှဆင်ပေးရာတွင်လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိမ်တွင်ရှိသော အိမ် ဧည့်ခန်းများကို လူကြီးမင်း တို့ စိတ်ကြိုက် နောက်ဆုံးပေါ် ပုံစံဒီဇိုင်းများဖြင့် အလှဆင်ပီး သန့် ရှင်း သပ်ရပ်လှပသော အိမ်ဧည့်ခန်း များအဖြစ် အလှဆင်လိုပါက Myan Nan Dar ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွ ယ်မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ဆေးသည် အပူရှိန် -၇၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် မှ ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်း ခံနိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံများ၊ အအေးခန်းအရောင်းကောင်တာများ၊ အအေးခန်းကွန်တိန်နာများ၊ Freezer များတွင်း အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အသုံးပြုသောနေရာတိုင်းကို ပိုမိုမာကြောစေ၍ အက်ကွဲကြောင်းများ၊ ဟာကွက်လမ်းကြောင်းများ မရှိသောကြောင့် အကောင်းဆုံးသောအပူဒဏ်ကာကွယ်စေခြင်းနှင့် အအေးဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးခြင်း အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိစေပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ကိုအသုံးပြုနိုင်သော နေရာများ အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံများ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာစက်ရုံများမှ အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်ရုံခန်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အီလက်ထရောနစ် စက်ရုံများ၊ LPG-LNG သိုလှောင်ကန်များ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ ကွန်ဒိုအဆင့်မြင့်တိုက်ကြီးများ၊ တိုက်ခန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ အဏ္ဏဝါရေကြောင်းဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဘော်ယာများ လူနေအိမ်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ စသည့်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ စွမ်းအင်သက်သာခြင်း အပူဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း ဖော့ဆေးသည် အပူကိုသိသာထင်ရှားစွာခုခံကာကွယ်နိုင်ခြင်းနှင့် အခန်းအတွင်းအအေးဓာတ်ကို တာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း (ဥပမာ။ ။ အဲယားကွန်းအခန်းများတွင် အသုံးပြုပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအပြားသုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အား သက်သာစေပါသည်။) အတွင်းမှလေများကို အပြင်သို့ မထွက်စေခြင်းနှင့် အပြင်မှလာသောလေများကို အတွင်းသို့ မဝင်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လေမလုံ၍ လေစိမ့်ဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပွားတက်သော အစိုပြန်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ အဖက်ဖက်မှလာသောအပူဒဏ်ကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်းစသော အထူးဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသောကြောင့် ဖော့ဆေးသည် နွေရာသီအတွက် အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အလွယ်တကူမီးမလောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်း ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့သည် အလွယ်တကူမီးမလောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အလွယ်တကူမီးလောင်မှုကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ရေလုံခြင်းနှင့် ရေစုပ်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း ဖော့ဆေးကို စတင်အသုံးပြုသောအခါ အရည်အနေဖြင့် အပေါက်ငယ်များ၊ ချိုင့်ခွက်များ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ ကွက်လပ်များကို ဖြည့်ပေးပြီး ခဏအတွင်းဖော့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ရေလုံခြင်းနှင့် ရေဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း စသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ရရှိစေပါသည်။ ထို့ အပြင် ရေစုပ်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ထပ်မံရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အသံလုံခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်အသံပျံနှံ့မှု ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှလာသောအသံများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း (သို့) အသံလုံခြင်း စသော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်များစွာ အကျိုးကျေးဇူးရှိသော ဖော့ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ဆေးကို အသုံးပြုသောအခါ ဖော့ဆေးသည် အနံ့မရှိသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အနံ့ဆိုးများ ပျံ့နှံ့ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း၊ ဖော့ဆေးသည် ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့် အမှုန့် ထွက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှကြည့်မည်ဆိုပါက သင့်တော်သော ဖော့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ISO-14000) ရရှိထားသောကြောင့် ဖော့ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူမူပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည့်သည်ဆိုးကျိုးမှ သက်ရောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲသင့်သော ဖော့ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အခန်းအတွင်းလေထုမျှတခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအေးဂျင်စီ (EPA) အရ အခန်းအတွင်း လေအရည်အသွေးနေထိုင်မှု၏ အဓိကကျသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဖော့ဆေးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သော စိုစွတ်မှုများဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မှိုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ အနံ့မရှိသောကြောင့် အသုံးပြုသူများအား အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေဒနာများ မဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ဖော့ဆေးတွင် အသုံးပြုထားသော ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် အသုံးပြုသူများအပေါ်တွင် ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် Allergies ဖြစ်ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။
အဏ္ဏဝါရေကြောင်းဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ငါးဖမ်းသင်္ဘောများတွင် အသုံးပြုခြင်း ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ဆေးသည် ရေပေါ် ပေါ်စေသောဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့် လှေများ၊ သင်္ဘောများ၊ ကုန်တင်တွဲရေယာဉ်များ၊ ဘော်ယာများ၊ ရေပေါ်လွန်းကျင်းများ စီးပွားရေးသုံးရေယာဉ်များစသည့် အဏ္ဏဝါရေကြောင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ 1.	ရေစုပ်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း။ 2.	အသုံးပြုရလွယ်ကူခြင်းနှင့် စီးပွားရေးတွက်ချေကိုက်ခြင်း။ 3.	ရေယာဉ်၏ကိုယ်ထည်အတွင်း ထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် နေရာလပ်များကိုဖြည့်ပေးပြီး ရေယာဉ်ကို ရေတွင်အလွယ်တကူမနစ်မြှုပ်စေခြင်း။ 4.	ရေခဲရိုက်ထားသော ငါးများနှင့် ရေခဲများသိုလှောင်ထားရှိရာနေရာရှိ နံရံများ အဖုံးများ ပိုက်များတွင် ဖော့ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ပြင်ပမှအပူများ အခန်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ 5.	အပူပမာဏကိုလျှော့ချစေခြင်းဖြင့် ရေခဲအရည်ပျော်ခြင်းကို အထူးကာကွယ်ပေးခြင်း။ 6.	ပတ်ဝန်းကျင်မှလာသော ပူနွေးသောလေများ၊ အင်ဂျင်စက်ခန်းမှလာသောအပူငွေ့များကို ကာကွယ်ပေးခြင်း။ 7.	စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်လျှော့နည်းစေခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများစွာကို ရရှိစေပါသည်။ အဏ္ဏဝါရေကြောင်းဘော်ယာများ 1.	ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ဆေးကို ဘော်ယာများတွင် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘော်ယာနံရံများသည် ပတ်ဝန်းကျင်မှ ထိခိုက်မှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း။ 2.	ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ဆေးသည် ရေပေါ်ပေါ်စေသောဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့် ဘော်ယာများအတွက် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အထူးသင့်လျော်မှုရှိုခြင်း။ 3.	ရေစုပ်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားသောကြောင့် ဘော်ယာများအား ရေမြှုပ်ကဲ့သို့ အလွယ်တကူနစ်မြှုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ 4.	ဘော်ယာများအား ပင်လယ်ဆားငန်ရေကြောင့်သံချေးတက်ခြင်း၊ ပေါက်သွားခြင်းတို့ မှ ကင်းဝေးစေခြင်း။ 5.	ဘတ်တီးရီးယားများ၊ ရေပိုးမွှားများ တွယ်ကပ်ခြင်း၊ မှိုတက်ခြင်းကို ခုခံကာကွယ်နိုင်ခြင်း ရှိပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ကိုအသုံးပြုနိုင်သော နေရာများ အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံများ၊ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာစက်ရုံများမှ အဆင့်မြင့်နည်းပညာစက်ရုံခန်းများ၊ လေဆိပ်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ၊ အီလက်ထရောနစ် စက်ရုံများ၊ LPG-LNG သိုလှောင်ကန်များ၊ ပိုက်လိုင်းများ၊ ကွန်ဒိုအဆင့်မြင့်တိုက်ကြီးများ၊ တိုက်ခန်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ဆေးရုံများ၊ အဏ္ဏဝါရေကြောင်းဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ဘော်ယာများ လူနေအိမ်နှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများ စသည့်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူးများ စွမ်းအင်သက်သာခြင်း အပူဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာခြင်း ဖော့ဆေးသည် အပူကိုသိသာထင်ရှားစွာခုခံကာကွယ်နိုင်ခြင်းနှင့် အခန်းအတွင်းအအေးဓာတ်ကို တာရှည်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်း (ဥပမာ။ ။ အဲယားကွန်းအခန်းများတွင် အသုံးပြုပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအပြားသုံးစွဲမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်အား သက်သာစေပါသည်။) အတွင်းမှလေများကို အပြင်သို့ မထွက်စေခြင်းနှင့် အပြင်မှလာသောလေများကို အတွင်းသို့ မဝင်နိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ လေမလုံ၍ လေစိမ့်ဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပွားတက်သော အစိုပြန်မှုများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း၊ အဖက်ဖက်မှလာသောအပူဒဏ်ကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်းစသော အထူးဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသောကြောင့် ဖော့ဆေးသည် နွေရာသီအတွက် အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ အလွယ်တကူမီးမလောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိခြင်း ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့သည် အလွယ်တကူမီးမလောင်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက အလွယ်တကူမီးလောင်မှုကို ခုခံနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ ရေလုံခြင်းနှင့် ရေစုပ်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း ဖော့ဆေးကို စတင်အသုံးပြုသောအခါ အရည်အနေဖြင့် အပေါက်ငယ်များ၊ ချိုင့်ခွက်များ၊ အက်ကွဲကြောင်းများ ကွက်လပ်များကို ဖြည့်ပေးပြီး ခဏအတွင်းဖော့အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသောကြောင့် ရေလုံခြင်းနှင့် ရေဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း စသည့် ဂုဏ်သတ္တိများကို ရရှိစေပါသည်။ ထို့ အပြင် ရေစုပ်ဝင်မှုခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ထပ်မံရရှိစေနိုင်ပါသည်။ အသံလုံခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်အသံပျံနှံ့မှု ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှလာသောအသံများကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း (သို့) အသံလုံခြင်း စသော ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်များစွာ အကျိုးကျေးဇူးရှိသော ဖော့ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့ဆေးကို အသုံးပြုသောအခါ ဖော့ဆေးသည် အနံ့မရှိသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်သို့ အနံ့ဆိုးများ ပျံ့နှံ့ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း၊ ဖော့ဆေးသည် ကျစ်လျစ်သိပ်သည်းမှုအကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့် အမှုန့် ထွက်ခြင်းမရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးရှုထောင့်မှကြည့်မည်ဆိုပါက သင့်တော်သော ဖော့ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ ပိုလီယူရီသိန်း (Polyurethane) ဖော့သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် (ISO-14000) ရရှိထားသောကြောင့် ဖော့ဆေးကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူမူပတ်ဝန်းကျင်တွင် မည့်သည်ဆိုးကျိုးမှ သက်ရောက်ခြင်းမရှိသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုရှိသော ယုံကြည်စိတ်ချစွာသုံးစွဲသင့်သော ဖော့ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အခန်းအတွင်းလေထုမျှတခြင်း ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအေးဂျင်စီ (EPA) အရ အခန်းအတွင်း လေအရည်အသွေးနေထိုင်မှု၏ အဓိကကျသော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ဖော့ဆေးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မလိုလားအပ်သော စိုစွတ်မှုများဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး မှိုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းခြင်း၊ အနံ့မရှိသောကြောင့် အသုံးပြုသူများအား အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်သော ဝေဒနာများ မဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ဖော့ဆေးတွင် အသုံးပြုထားသော ဓာတုပစ္စည်းများကြောင့် အသုံးပြုသူများအပေါ်တွင် ဓာတ်မတည့်ခြင်းနှင့် Allergies ဖြစ်ခြင်းစသည့် ဆိုးကျိုးများမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။
လှပသေသပ်သော Bed Room Product / Design
Pyit Tine Htaung ကုမ္ပဏီသည် လူကြီးမင်းတို့ အိပ်ခန်းပုံစံဒီဇိုင်းများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ် ကြိုက်ရေးဆွဲပေးနေသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။အတွင်းအပြင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးသည့်အပြ င် ပရိဘောဂနှင့်အိမ်တွင်းအလှဆင်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့်မိမိတို့ အိပ်ခန်းပုံစံဒီဇိုင်းအလှဆင်နိုင်ရန်အတွက် Pyit Tine Htaung ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သေသပ် လှပသော အိမ်ဧည့်ခန်း များ ( Living Room Decoration )
AMPS Construction ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အဆောက်အဦး၊ ဟိုတယ် များတွင် ရှိ သောလူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ဧည့်ခန်းနှင့် အခြား အလှဆင် ပရိဘောဂ ပစ္စည်းများကို လှပပီး ခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းဆန်သော အိမ် ဧည့်ခန်းများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ လာစေရန် AMPS Construction ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် အလှဆင် ပြုပြင် ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိမ် ဧည့်ခန်းများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ လှပသေသပ်သော ဒီဇိုင်း ပုံစံများဖြင့် အလှဆင်နိုင်ရန်အတွက် AMPS Construction ကုမ္ပဏီ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီး မင်းတို့ ၏ အိမ်အတွင်းပိုင်းဖြစ်သည့် အိမ်တွင်ရှိသော အိမ် ဧည့်ခန်းများကို လူကြီးမင်း တို့ စိတ်ကြိုက် နောက်ဆုံးပေါ် ပုံစံဒီဇိုင်းများဖြင့် အလှဆင်ပီး သန့် ရှင်း သပ်ရပ်လှပသော အိမ်ဧည့်ခန်း များအဖြစ် အလှဆင်လိုပါက AMPS Construction ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
AMPS Construction ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ခြံဝင်းများတွင် အနားယူအပန်းဖြေ နိုင်ရန် အတွက် ဆောက်လုပ်ထားသည့်ရေ ကူးကန်နှင့် ရေကူးကန်ဒီဇိုင်းများကို လူကြီးမင်း တို့ အတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲ ဆောက်လုပ်ပေးသည့်ဝန်ဆောင်မှု့ များကို ပြုလုပ်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ဝယ်ယူသူ အကျိုးဖြစ် နေထိုင်သူစိတ်ချမ်းသာစေမည့် AMPS Construction ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Construction &amp; Engineering Services
Topographic Survey Land and Construction Survey Survey of Roads and Bridges Architectural Design Building Structural Design Steel Structural Design M&amp;E Design Turn Key Civil Work Contractor Building Construction Building Maintenance &amp; Renovation Work Interior Decoration Temporary Camp Construction Fencing &amp; Gate Door Painting (Building paint, Special Painting like Epoxy Painting etc) Earth Work Road &amp; Bridge Construction Piling Work Jetty &amp; Marine Construction Flooring (Vinyl Floor, Carpet Floor, Stud Rubber Tile, False Floor etc) Plumbing &amp; Electrical Design Water Supply Installation, Renovation &amp; Maintenance Electrical Installation &amp; Maintenance HVAC Installation &amp; Maintenance Cold Room, Chill Room Installation &amp; Maintenance CO2, FM 200 System Smoke Detector System Design &amp; Calculation of Steel Structure Fabrication, Installation &amp; Modification of Steel Structure Installation of Cranes &amp; Machinery Repair &amp; Refurbishment of Containers, Tote Tank, Jet Fuel Tank etc Maintenance Work Blasting Services (Sand, Shot Blast, Garnet) Coating Services with Anti-corrosive, Epoxy Paint System etc Logistic Services Custom Clearance Services Manpower Supply Materials Sourcing and Supply Local and Oversea Procurement Malford Flooring Pte Ltd (Singapore) for Vinyl (PVC) Floor, Carpet Floor, Marine Type Stud Rubber Floor Tile
အိမ်အဆောက်အဦးအတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအလှဆင်ခြင်း (Interior Design)
a 12 Myanmar ကုမ္ပဏီမှလူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်၊မီးဖိုချောင်၊အိပ်ခန်း၊ဧည့်ခန်းများ ကိုလူကြီး မင်းတို့ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းများဖြင့် အလှဆင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ မီးဖိုချောင် များကို သန့် ရှင်းသပ်ရပ်ပီး လှပသောဒီဇိုင်းများဖြင့် အလှဆင်ပေးခြင်း၊ လူကြီးမင်းတို့့အိပ် ခန်းများကို လှပသော ကုတင်မွေ့ ယာ တို့ ဖြင့် သေသပ်လှပစွာ ဒီဇိုင်းအလှဆင်ပေးလျက်ရှိ ပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အဆောက်အဦး အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း (Interior Design) များကို သန့်ရှင်းသပ်ရပ် လှပစွာ ဒီဇိုင်းအလှဆင်ပြီး လူကြီးမင်းတို့ ၏ လူနေမှု ဘဝပုံစံ Life style ကိုပြောင်းလဲလိုပါက a12 Myanmar ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံ စမ်းနိုင်ပါသည်။
သေသပ် လှပပီး ဒီဇိုင်း ဆန်းသော အဆောက် အဦး အတွင်း အပြင် ဒီဇိုင်း အလှ များ ( Interior Decoration )
Feel Good Service ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်များ ၊ ဆိုင်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများကို သေ သပ် လှပသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် အတွင်းအပြင် ဒီဇိုင်း အလှဆင်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ဒါ့ပြင် လူကြီးမင်းတို့၏ ဆိုင်ခန်း ဒီဇိုင်း အတွင်းအပြင် များကို လူကြီးမင်းတို့ အတွက် စိတ်တိုင်း ကျ ဆောင် ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အိမ်များ၊ ဆိုင်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများနှင့် အခြား အဆောက်အဦးများကို လှပသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် အတွင်း အပြင် ဒီဇိုင်း အလှဆင် လိုပါက Feel Good Service ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Pile Foundation Services &amp; Trading
DE PA WADDY Co.,Ltd Our Services Jack-In Piling Bored Pile Pile Driving Unit Slient Sheet Pile Pile Casting Yard Concrete Supply
Shera Wood ကို အသုံးပြုပြီး သင့်အိမ်မက်ထဲက အိမ်လှလှလေးကို ဆောက်လုပ်လို့ရပါပြီ။ Shera Wood ကို Green Innovative Fiber Cement Board အဖြစ် လူအများသိကြပါတယ်။ Shera Cement Board ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ ပိုးစား ခြကိုက်မှု လုံးဝမရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုဒါဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ ရေစိုခံနိုင်ခြင်း၊ ကွေးကောက်သွားမှု မရှိခြင်း၊ Installation လုပ်ရတာ လွယ်ကူခြင်း၊ ဆွေးမြေ့ပျက်စီးမှု မရှိခြင်း၊ ပွတ်တိုက်မှုကြောင့် မပျက်စီးနိုင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ရ လွယ်ကူခြင်း၊ ကြာရှည်ခံနိုင်ခြင်း၊ Maintenance လုပ်စရာမလိုခြင်း၊ Warranty ရှိခြင်း စသည့်အကျိုးကျေးဇူးမျာကို ရရှိမျာဖြစ်ပါတယ်။ Shera Wood ကိုအသုံးပြုပြီး အိမ်တစ်အိမ်လုံး ဆောက်လုပ်နိုင်တာမို့ ဘာမှပူစရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် SHERA WOOD ကို အသုံးပြုပြိး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိမ်းသိမ်းကာကွယ်ကြရအောင်။